Shir u dhexeeya Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa caawa ka furmay magaalada Garoowe. – Radio Daljir
Shir u dhexeeya Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa caawa ka furmay magaalada Garoowe.
Maajo 12, 2019 7:41 g 3
Mustafa Mohamed 7 months
Tuugta kursi doonta ah ilaahow naga qabo.
Soomaaliya waa in ay xukuntaa dawlad dhexe oo awood leh oo kala caydhisa yeyda dhareerku
Soomaaliya waa in ay xukuntaa dawlad dhexe oo awood leh oo kala caydhisa yeyda dhareerku ka daadanayo ee ka fekeraysa Sidee kursi u helaa.
Xaamud 7 months
Maansha alaah roob ayaa ka da ay garoowe
alle ha idiinku wado
U Jawaab Mustafa Mohamed Buri halceliska